လူငယ်တော်တော်များများရှိတဲံ့Facebook (သို့) ပုံရိပ်ယောင် နိုင်ငံတော် ~ ရင်နင့်အောင်ရဲ့ ဘလော့ခ်
လူငယ်တော်တော်များများရှိတဲံ့Facebook (သို့) ပုံရိပ်ယောင် နိုင်ငံတော်
1:30 PM ရင်နင်အောင် 1 comment
Posted by ရဲဂျာ on October 1, 2011 at 12:18pm in Facebook users
Face Book:Virtual State facebook ဆိုတာကို ကို ကြားနေခဲ့တာ ကြာပြီ ဖြစ်သော်လည်း သူ သိပ်မသိခဲ့ပါ။ သုံးဖို့လည်း မကြိုးစားခဲ့ပါ။ ဟိုယခင် ၃-၄ နှစ်လောက်ကတည်းက..စင်ကာပူက..ညီမ၀မ်းကွဲတွေ..Hi-5 , friendster တို့ နဲ့ အသစ်အဆန်းဖြစ်ကာ..ပျော်နေကြစဉ်ကတည်းက..ဘေးက သွားငေးပြီး.. သြော်..လူငယ်တွေ သူတို့ ခြင်း ..ပုံလေးတွေ တင်လိုက်.. နောက်လိုက်နဲ့ ပျော်စရာတော့..ကောင်းသား…လို့ သာ တွေးမိရင်း.. နဲနဲမှ စိတ်မ၀င်စားခဲ့ပါ။ ဖိုရမ်ဆိုတာတွေလည်း.. မသိခဲ့..မထိုင်ဖူးခဲ့ပါ။ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ၀င်တောင် မငေးမိခဲ့တာ..ဘယ်ချောင်မှာ သွားခေတ်နောက်ကျ နေခဲ့လည်း မသိ။ စလုံးမှာ တုန်းက.. တပတ် ၅ ရက်ခွဲ အလုပ်မှာ.. ပြန်လာရင်..ဟင်းချက်.. ထမင်းစားရင်း .. သတင်းလေး နားထောင်.. ပြီး..တီဗီ ခဏ ကြည့်.. စာအုပ်လေး တအုပ် ဟိုလှန် ဒီလှန်လုပ်ရင်း.. ညခင်း တခု..လျင်လျင်မြန်မြန် ကုန်သွားတတ်တာပဲ..မှတ်မိသည်။ အင်တာနက်ကို အလုပ်ထဲမှာ..နေ့လည် ထမင်းစားချိန်သာ ဗမာသတင်း ၀က်ဆိုဒ်တွေ လျှောက်ကြည့် ဖြစ်သည်။ တော့်တော့်ကို ဝေးခဲ့တာပါ.. Virtual world နဲ့ပေါ့။
ဒီ မြေနီိနီမြို့လေးကို အရောက် ငေါင်စင်းစင်း နေ့ရက်တွေကို လည်း..မိုးမခလေး ဖတ်လိုက်.. .ဒီဗီဘီက သတင်းလေးတွေနဲ့ မောလိုက်.. ဦးဦးဖျားဖျားဖတ်ရတဲ့..weekly eleven လေး မှာ ဗမာပြည်ကို လှမ်းငေးလိုက် နဲ့.. ဒီလိုပဲ ဖြတ်သန်းနေတုန်း.. မိုးမခက မိတ်ဆက်ပေးတဲ့.. ဘလော့ဆိုတာ နဲ့ ပထမဆုံး ရင်ခုန်ခဲ့ရတာပါ။ အင်တာနက် ရဲ့ အသုံးချမူတွေ ထဲမှာ blogging က..ပထမဆုံး အချစ်ဦးပါ။ ကိုယ်ကလည်း စာရေးချင်သူ ဆိုတော့.. အသဲစွဲလိုက်သမှ..ခုထက်ထိ ချစ်နေရဆဲပါပဲ။
Social networking တွေ ပုံသဏ္ဌန်မျိုးစုံ နဲ့ အနီးအပါးမှာ ပိုလို့ များပြားလာနေပေမဲ့.. လူမူပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး မှာ သိပ် မကျွမ်းကျင်လှ..အရမ်းကြီး စိတ်မ၀င်စားလှ တဲ့အတွက်.. တယောက်ထဲ..ပြောချင်တာပြော..ရေးချင်တာရေးလို့ရနေတဲ့..ဘလော့ ကနေ.. တဖ၀ါးတောင် ခွာပြီး မျက်မွေးထော် မကြည့်ခဲ့မိဘူး။ အီးမေးလ်ထဲ ရောက်လာတဲ့.. Invite တွေ ဆို ယောင်လို့တောင် ကလစ် မကြည့်ဘူး။ သိတယ်လေ..အဲဒါတွေက.. သူ့အလိုလို အီးမေးလ် စာရင်းတွေထဲက..လူတွေကို လျှောက် ဖိတ်တာဆိုတာ။ ကိုယ်သွား ကလစ် ကြည့်ရင်.. ကိုယ်မသိပဲ..သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ တွေကို တဂျီဂျီ အနှောင့်အယှက် ပေးတော့မယ်လေ။
တနေ့သားတော့..သူငယ်ချင်း ကဗျာဆရာမကြီးက.. Facebook ကို လာခဲ့ပါတဲ့။ အဲဒါနဲ့..ဒီတခါတော့..ကိုယ့်ချစ်သူငယ်ချင်း လဲဖြစ်.. ဒီလောက် ခဏခဏ ကြားနေတဲ့.. Facebook လာစမ်း ဆိုပြီး ၀င်ကြည့်လိုက်တာ..မှတ်ပုံတင်ထားသူ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်း ၁၅၀ ကျော်ထဲမှာ..ခုတော့…ကိုယ်လည်း တယောက် အပါအ၀င် ဖြစ်နေပါတော့တယ်။
ရောက်ကာစ ဆိုတော့..ဟိုလျှောက်ကလိ..ဒီလျှောက်ကလိ ကြည့်- ကြည့် တယ်။ အင်တာနက် သုံးသူ ဗမာ အသိုင်းအ၀ိုင်းကလဲ ကျဉ်းကျဉ်းလေး ဆိုတော့..မိတ်ဆွေတွေ ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေထဲက..မိတ်ဆွေဟောင်းတွေ ပြန်တွေ့.. နဲ့ ခဏတော့ ပျော်သွားသလိုပါပဲ။ ဘာအဖွဲ့ညာအဖွဲ့တွေလည်း စုံလို့။ အမယ်..အပင်လက်ဆောင်ပေးရင်.. အပင်က..တဖြည်းဖြည်းကြီးတောင်လာ ဆိုပဲ။ အခု နောက်ဆုံး Market Place ဈေးတောင် ဖွင့်တော့မည် တဲ့။ ဒါပေမဲ့.. သူ့ ရဲ့ feature တွေ platform တွေက.. ကိုယ့်အတွက် နဲနဲ မျက်စိ နောက်စရာ ကောင်းနေတယ်။ ဘာလို့လဲ မသိဘူး..ကိုယ့်အတွက်တော့..သိပ်ပျော်စရာ မကောင်းဘူး။ ဘလော့မှာတင်..ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေ ပြည့်စုံ နေပြီ ဆိုတော့..သိပ် မသွားချင်တော့ဘူး။ အချိန်ကလည်း ရှိသေးတယ်လေ။ ဒါပေမဲ့.. အခု နှစ်ပိုင်း အချိန်ပိုင်းလို facebook ဆိုတာ သိပ်ခေတ်စားလာတဲ့ အချိန်မှာ.. တခြား..ဘလော့ နဲ့ မယဉ်ပါးတဲ့..စာဖတ် စာရေး သိပ်စိတ်မ၀င်စားတဲ့ သူငယ်ချင်းဟောင်းတွေက.. သူတို့ဖာသာ လျှောက်ရှာရင်း..သွားရင်းလာရင်း..ကိုယ့် ဆီကို တယောက်ပြီး တယောက်..တံခါး လာခေါက် ကြ တယ်။ အဲတော့လည်း တံခါး သွားဖွင့်လိုက်… နှုတ်ဆက်လိုက်ပေါ့.. ပြီးတော့လည်း..ကိုယ့်ဘလော့ပဲ ကိုယ်ပြန်လာ ထိုင်နေမိတာပဲ။ မိတ်ဆွေ တယောက်ဆို အခါတိုင်းလို အီးမေးလ် ကတောင် စာမရေးတော့ဘူး.. facebook ထဲမှာပဲ ရေးတော့တယ်။
ကိုယ်ကတော့..ဘာရယ်မှ မဟုတ်ဘူး..ပြောခဲ့သလို..ဘလော့တလုံး နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတာနဲ့.. စိတ်မ၀င်စားဖြစ်တာ။ တလောက..အမေရိကန်သမ္မတ မဲဆွယ်ပွဲတွေမှာတော့.. facebook က..အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဌက ပါခဲ့ပြီး.. သမ္မတ အိုဘားမား ကိုယ်တိုင် facebook ကို ကောင်းကောင်း အသုံးပြုခဲ့ တယ်လို့ ဆိုထားတယ် ။ နောက်- အီဂျစ်နိုင်ငံက.. အစိုးရ ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုလည်း.. facebook ကပဲ ဆောင်ကျဉ်းပေး ခဲ့သလိုလို.. သတင်းတွေ ဖတ်လိုက်ရသည်။ တပြိုင်တည်းမှာပဲ..အသစ်အသစ် တို့ရဲ့ ထုံးစံ အတိုင်း အကျိုးအပြစ် မကွဲပြားပဲ.. အငြင်းပွားဖွယ်ရာ များလည်း.. ပြောဆိုနေကြတာ..ခဏခဏ ဖတ်နေ မြင်နေရ ပါတယ်။ သတင်းစာ ဆောင်းပါး တခုမှာ ဖတ်လိုက်ရတာက.. လူသတ်မူပေါင်းများစွာ နဲ့ တသက်တကျွန်း ထောင်ဒဏ် ကျခံနေရတဲ့ မာဖီးယား ခေါင်းဆောင်တယောက် ရဲ့ facebook profile မှာ.. ပရိသတ် မိတ်ဆွေ များစွာနဲ့.. သူရဲကောင်းကြီး လုပ်နေတာ သင့်တော်ပါရဲ့လား တဲ့။ အခုဆိုရင်.. ဆေးလိပ်ကြော်ငြာတွေမှာ – ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်ပါသည် -လို့ ထဲ့ပေးရသလိုပဲ.. တလောက..အော်စီ က..Internet Service Provider က..ဒီလို ကြော်ငြာ ထားတာကြည့်ပြီး..ပြုံးလိုက်မိပါသေးတယ်။
If you’ve got time to facebook, you’ve got time to call your mum
These days, it seems we have less and less time to chat. Yet in the middle of this time crunch we still find hours and hours for things like social networking sites. There’s nothing wrong with that, just don’t forget to sparealittle time to phone home.
facebook သုံးတာ မှားတဲ့ကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး.. မိသားစုကို ဖုံးခေါ်ဖို့သာ မမေ့ပါနဲ့…တဲ့
လူလည်ပဲ..။ သူက.. Telecon ကုမ္ပဏီ ဆိုတော့..ဖုံးလိုင်းရော..အင်တာနက်ပါ ရောကြော်ငြာ လိုက်တာကိုး။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၃ လလောက်ကတော့.. မမျှော်လင့်ပဲ work shop လေးတခုမှာ Guardian သတင်းစာပါ..face book နဲ့ပတ်သတ်တဲ့.. ဆောင်းပါးလေး တပုဒ်ကို သေချာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာလေး မို့..ဘလော့မှာ ရေးမယ် ရေးမယ်နဲ့ မစဖြစ်ဘူး။ ဆောင်းပါးရှင်ကတော့.. facebook အကြောင်းကို နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် လိုက်ရှာဖွေ ပြီး.. အဆိုးမြင် ရှုထောင့်ကနေ ရေးထားတာပါ။ ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး.. အခု နေ့စဉ် ဘ၀ တွေမှာ သိပ်ခေတ်စားလာနေတဲ့.. Social networking ဆိုတာ ကိုလည်း အားလုံးက..စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်လာနေတော့.. ဝေမျှ ကြည့်တာပါ။
ဆောင်းပါး မူရင်းကို ဖတ်ကြည့်မယ် ဆိုရင်..သူ့အသုံးတွေက..သိပ် ထိမိပါတယ်။ ပြုံးချင်စရာ လည်း ကောင်းပါတယ်။ သူက..ဆောင်းပါး အစကို ဒီလို ဖွင့်ထားတယ်။
Why on God’s earth would I needacomputer to connect with the people around me?
face book ကို ဖန်တီး ခဲ့တဲ့ ၂၄ နှစ်အရွယ် ကမ္ဘာ့အသက်အငယ်ဆုံး သူဌေးလေး Zuckerberg ကို..လူတိုင်းလိုလို သိကြမှာပါ။ သူက.. ကမ္ဘာ့ကွန်ပြူတာ ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်ကြီး Bill Gates ကို အားကျ လို့လား.. မတူတူအောင်လိုက်တု သလားတော့မသိ။ သူလည်း Harvard ကျောင်းကို တန်းလန်းထားခဲ့တဲ့ ညဏ်ကြီးရှင်လေး တယောက်ပါ။ သူတို့ ကျောင်းသားအချင်းချင်း..ပညာစမ်းဖို့..စဖို့ နောက်ဖို့ ပျော်ဖို့ ဆိုပြီး..စု လုပ်ကြရင်း..ဒီ facebook ဆိုတာလေး ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ facebook ဆိုတဲ့ နံမယ်ကလည်း.. တက္ကသိုလ်တွေမှာ မျက်နှာသစ် တွေ ကို ကြော်ငြာတဲ့..နံရံကပ် ဘုဒ်ကလေး တွေကို ပြောတာပါ။
ဒီဆောင်းပါး မှာ အဓိက ရေးထားတာက.. အဲဒီ သူဌေးပေါက်စလေး Zuckerberg အကြောင်း မဟုတ်ပဲ.. ဒီလို venture capital .. တီထွင်စွန့်စားဖန်တီးမူလေးကို ၀ယ်ယူခဲ့တဲ့..နောက်ကွယ်ကနေ.. ထောက်ပံ့နေတဲ့ .. သူကိုယ်တိုင်လည်း venture capitalist ကြီး တယောက်ဖြစ်တဲ့..အသက် ၄၀ ကျော်အရွယ် Peter Thiel ဆိုသူရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်းပါ။
သူကိုယ်တိုင်က..နံမယ်ကျော် Pay Pal ငွေကြေးစနစ် ကို ပူးတွဲ ဖန်တီးခဲ့တဲ့.. ညဏ်ကြီးရှင် တယောက်ပါ။ သူ့ကို Fortune magazine ကနေ PayPal Mafia လို့ တောင် နံမယ်တပ်ခဲ့တယ်။ Stanford ကျောင်းထွက်ဖြစ်တဲ့ Thiel က ကျောင်းမှာတည်းက.. Liberal သမားတွေ.. Multicultural သမားတွေကို ဆန့်ကျင်ဝေဖန်ခဲ့တဲ့.. အနာဂါတ်စိတ်ကူးယဉ် ရှေးရိုးစွဲ လက်သစ် တယောက်ဖြစ်တယ် ဆိုတာ လူတိုင်း သိကြတယ်တဲ့။
လူ့ဘ၀ သက်တမ်းဆိုတာ..စိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်..ကြမ်းကြုတ်ခက်ထန်တယ် တိုတောင်းလှတယ်..ဒါ့ကြောင့် နောက်ထပ် ဆင့်ပွားပုံရိပ် ဘ၀ တခုကို သွားကြမယ်..အဲဒီမှာ သဘာဝ တရားကြီးကို အနိုင်ပိုင်းပြစ် နိုင်တယ်လို့.. Thiel က..တနေရာမှာ ဆိုခဲ့ဖူးသတဲ့။ သူက..အခွန်- ဆိုတာကြီးကို မယုံကြည်သလို ..ဘဏ်ငွေကြေးစနစ် ကို သဘောမကျတဲ့ အတွက်..တန်ဖိုးနဲ့ပိုသက်ဆိုင်တဲ့.. နိုင်ငံ နယ်နမိတ် စည်းမရှိတဲ့ PayPal ကို စပြီး လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်တော့.. Zuckerberg ရဲ့ facebook ဆိုတာလေးကို.. ဟိုး..အစပိုင်းအချိန်ထဲက..ငွေကြေးအလုံးအရင်း နဲ့ ထောက်ပံ့လာခဲ့တယ်။
လူဆိုတာမျိုးဟာ..သိုးတွေလို အုပ်စု သဘာဝ ရှိတယ်ဆိုတာကို Thiel နဲ့သူ့အုပ်စု ဂုရုကြီးများက.. ကောင်းကောင်း အသုံးချ နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်း ထောက်ပြထားတယ်။ အခုကိုပဲ ကြည့်လေ.. သူငယ်ချင်း တယောက်က.. facebook ဆို..နောက်တယောက်.. နောက်တယောက်နဲ့..တရက် ၂ရက် အတွင်းကို..သိုးအုပ်တအုပ်တော့..ရသွားတာပဲ။
ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာက.. သဘာဝ ကပေးတဲ့ တိုတောင်း ရှုပ်ထွေးတဲ့ လူ့ဘ၀ကို မနှစ်သက်တဲ့ Thiel က..အခုဆိုရင်..Cambridge တက္ကသိုလ်က..မျိုးရိုးဗီဇ ဆိုင်ရာပညာရှင်..Aubrey Dde Grey ရဲ့ မသေခြင်း ကို ရှာဖွေနေတဲ့..သုသေသန လုပ်ငန်းအတွက် ဒေါ်လာငွေ ၃.၅ သန်း ထဲ့ဝင်ဖို့ ကတိပြုထားပြီး.. အသက်ဆက်နည်း နည်းပညာ တခုကို စတင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံ နေပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ Artificial Intelligence (AI) လို့ခေါ်တဲ့ အသိညဏ်အတု နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်း တခုမှာလည်း..ဘုတ် အဖွဲ့ဝင် အကြံပေး တယောက် ဖြစ်နေပါ သတဲ့။
အံ့သြ ထွေပြားဖွယ်ရာ များပါပေ။ ဆောင်းပါးရှင်ကတော့.. Thiel ဟာ သဘာဝ လောကအစစ် ကြီးကို ဖျက်စီးနေသူ.. လို့ စွပ်စွဲထားပြီး.. facebook ကိုလည်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကြိုးကိုင် ခြယ်လှယ် ဖျက်စီးမူ ( global manipulation ) လို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကို နံမယ်တပ်ထားပါတယ်။
သေချာတာတော့..တကမ္ဘာလုံးက..လူတွေက..သူတို့ ဓါတ်ပုံတွေ.. အကြိုက်တွေ.. ကိုယ်ရေးရာဇ၀င် တွေကို.. ဒီ မျက်နှာဘုတ်အုပ် ကြီးပေါ်မှာ.. ဘယ်သူကမှ အတင်း အကြပ် မခိုင်းရပါပဲ.. ကြည်ဖြူပျော်ရွှင်စွာ.. ဖော်ပြနေကြတာမှာ..အကျိုးအမြတ်ရှိနေမှာကတော့.. ဒီဘုတ်အုပ်ကြီးကို ငွေကြေးအမြောက်အမြားဝင်ပြီး ချိတ်ဆက် ကြော်ငြာနေတဲ့.. Coca Cola, Blockbuster, Verison, Sony Pitcures and Conde Nast တို့လို နံမယ်ကြီး ဈေးသည်ကြီးတွေ နဲ့ အမျိုးသားလုံခြုံရေး လုပ်ငန်းကြီးတွေပဲ ဖြစ်နေတယ် – တဲ့။
ဒီနေရာမှာ ဆောင်းပါးရှင်က.. နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် စွပ်စွဲထားပြန်တာက.. facebook ရဲ့ ဘုတ် အဖွဲ့ဝင် နောက်တယောက်ဖြစ်တဲ့.. Jim Breyer ဟာလည်း CIA ရဲ့ လက်ခွဲတခုဖြစ်တဲ့ Q-Tel ဆိုတဲ့..လုပ်ငန်းကြီးနဲ့ ဆက်စပ် ပတ်သတ်နေ ပြီး.. CIA ရဲ့ ထောက်ပံ့မူတွေ အများကြီး ရှိနိုင်တယ် လို့ ဆိုထားပါတယ်။
နောက်ထပ် အပြစ်ဆိုထားတာကတော့..ပင်မရေစီး သတင်းစာ ဂျာနယ် လုပ်ငန်းကြီးတွေ မှာ စာတွေ သတင်းတွေအတွက် ငွေကြေးနဲ့ ၀ယ်ယူ အသုံးပြုရင်း..လည်ပတ်နေရပေမဲ့.. facebook ကြီးကတော့..သူ့ရဲ့ Input တွေ Content အတွက်..အသာလေး ထိုင်စောင့်ရင်း..အလကားပဲတင်း ရနေတာ…အဲဒီကမှ အကျိုးအမြတ်ယူနေတာ.. မသင့်တော် မမျှတပါတဲ့။ ဒါကတော့..စိတ်မကောင်းစရာ ခေတ်ရဲ့ ရေစီး ကြောင်း ပြောင်းမူ တခု ပေကိုး နော်..။
ဆောင်းပါးရှင်ကတော့.. ရေးရင်း ရေးရင်း..စိတ်တိုလာပုံရသည်။ သူ့ရဲ့ တစ်တစ်ခွခွ အသုံးတွေကို..ဖတ်ရင်း သဘောလည်းကျ..ရင်လဲ မောနေမိသည်။
ဘာတဲ့.. commodification of human relationships and extraction of capitalistic value from friendships တဲ့။ ဟုတ်လည်း ဟုတ်နေသားပင်။
ပြီးတော့.. အသုံးပြုသူတွေကို..ဒေါမနသ အပြည့် နှင့် ပြောလိုက်ပုံက..
မကြာခင်မှာ United Kingdom ထက်ပင် လူဦးရေ များပြားလာတော့မဲ့.. Thiel နဲ့သူ့အုပ်စုရဲ့ ပုံရိပ်ယောင်နိုင်ငံတော် အာဏာရှင် စနစ် အောက်မှာ.. နေမယ် မနေဘူးဆိုတာ..ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ရွေးကြပါတဲ့။
ကိုယ်ကတော့..အသာလေး စောင့်ကြည့် ဦးမယ်..။
1 အကြံပြု ထင်မြင်ချက်များ:
ဖတ်ရှုမှတ်သားသွားပါတယ်။ ဖေ့ဘွတ်ခ်ကိုတော့အမျိုးမျိုးပြောနေကြတာပါပဲ။ အကောင်းရော အဆိုးပါပေါ့။ ကိုယ်ယူတတ်ရင် အဆင်ပြေမှာပါ။